बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारकै पूर्वकर्मचारी फरार ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारकै पूर्वकर्मचारी फरार !
आजका पत्रपत्रिका मुख्य समाचार विषेश समाचार
काठमाडौँ, १३ असार, २०७६ . बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वकर्मचारी फरार छन् । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख छँदा अख्तियारमा विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका हुपेन्द्रमणि केसी फरार भएका हुन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको प्रमुख छँदा उनले सो जग्गा व्यक्तिको नाममा फिर्ता गर्न सघाएका थिए आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले केसीलाई दोषी देखेपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उनीसहित तीनजनालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ । अन्य दुईजना डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामप्रासद सुवेदी रहेका छन् । उनीहरु बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मुख्य बिचौलिया हुन् । सो जग्गा मोही खडा गरेर उनीहरुले आफ्नो नाममा ल्याएपछि अरुलाई बिक्री गरेका थिए ।
हुपेन्द्रमणि केसी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्च्याइएको
प्रकाशित मिति: 2019-06-28 2019-06-28 , संवाददाता: Aajako Khabar
Tagged अख्तियार बालुवाटार जग्गा प्रकरण ललिता निवास
एसईई परीक्षाः अलि बढी भावुक छु र खुशी पनि — सांसद शान्ता चौधरी
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : अनुसन्धान प्रक्रियामा व्यापक त्रुटि भएको ठहर
महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश १ सरकार बीच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर
‘सुरक्षा समन्वयमा उपप्रधानमन्त्रीको बारा भ्रमण’
Tags: अख्तियार, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास